Hlakulela Lawa Mafutha Wezinwele Ngokunakekelwa Kwezinwele Okuhamba phambili - Izinwele
Hlakulela Lawa Mafutha Wezinwele Ngokunakekelwa Kwezinwele Okuhamba phambili
umuthi omuhle kakhulu wokulawulwa kwezinwele
Uma kukhulunywa ngokugcina ukukhanya nokukhanya kwevolumu yethu, abesifazane baseNdiya baphendukela kumafutha ezinwele. Amafutha ezinwele abe yingxenye yemikhuba yethu yobuhle iminyaka eminingi - futhi kungani kungenjalo? Uwoyela wezinwele, noma ngabe ungohlaza, uhlanzekile noma ufakwe ngamakhambi namafutha abalulekile, unikeza izinzuzo eziningi. Yisimo sokulungisa esidala kunazo zonke esivikela imicu ebuthakathaka neyonakele. Amafutha emvelo, acindezelwe amakhaza acebile ngamaminerali, amavithamini kanye nama-acid anamafutha abalulekile enza ungqimba oluvikelayo emicu, okwenza ngcono ukuqina kwezinwele zakho. UMansi Chowdhary , Umqondisi, i-Body Cupid, isinika ukwehla kuzo zonke izinto uwoyela wezinwele.
Izinzuzo Zokusebenzisa Amafutha Wezinwele
Ukubhucunga izinwele zakho nesikhumbuzi sakho kabili noma kathathu ngesonto ngamafutha kusiza ekwenzeni ngcono ukusakazeka kwekhanda, okusiza ukuqinisa izimpande. Empeleni, uma ufuna imicu ecwebezelayo, ethambile, bushelela uwoyela ezintanjeni zakho, yishiye ubusuku bonke, bese uyigeza ekuseni ngakusasa. Le ngenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuvuselela imicu engaconsi phansi, ethambekele ekuphuleni. Kuyasiza futhi ukuvala izinwele zezinwele ezimagebhugebhu, nokunciphisa ukubukeka kwemiphetho yokuhlukanisa. Uma unesikhumba esomile, esilumayo, ukufaka uwoyela njalo kusiza ukulawula isimo. Ngisho nasezimeni ezijwayelekile, kuwumqondo omuhle ukugcoba isikhumba sakho sezinwele nezinwele ukondla izimpande nokuthuthukisa ukukhanya nevolumu. Futhi vumela'ungakhohlwa ukuthi isenzo esilula sokubhucunga ikhanda lakho siphumule kakhulu, ikakhulukazi uma ucindezelekile.
Amafutha Aphilisa Izinwele Zakho
Uwoyela Kakhukhunathi: Kukhishwe enyameni kakhukhunathi omusha, uwoyela kakhukhunathi uqukethe amazinga aphezulu e-omega-3 angena kalula esikhunjeni nasezinweleni. Inothile emafutheni agcwele, uvithamini E kanye nama-antioxidants aqinisa imicu futhi athobe isikhumba. Thatha okwehlukile kwezintombi, okucindezelwe okubandayo njengoba lokho kumnene ezinweleni zakho, futhi kungenye yezinhlobo ezinhle kakhulu uma ufuna izinwele ezijiyile, eziluhlaza. Ukwelapha izinwele zakho ngamafutha kakhukhunathi kabili ngesonto kuzosiza ukuzivikela ekulimaleni, futhi kuzigcine zibukeka ziphilile futhi zicwebezela.
Ubani ongasebenzisa: Uwoyela kakhukhunathi ulungele izinwele ezomile, ezifiphele, ezilimele kanye nekhanda elingenamanzi. Kuyasiza ukulungisa imicu eminyene nokuthambisa ikhanda elomile, elicasukile. Kuyasiza ukwengeza ukukhanya ezinweleni ezingathandeki futhi. Yondla izimpande ezibuthakathaka futhi isize ukunciphisa ukubonakala kwemiphetho yokuhlukanisa nezintambo ezilimele. Njengoba uwoyela kakhukhunathi ungaqina ekamelweni lokushisa, uwushise kancane ngaphambi kokufaka isicelo.
Indlela yokufaka isicelo: Kulabo abanekhanda elinamafutha nezinwele ezomile: Faka isicelo ezintanjeni, uvikele izimpande. Massage isikhumba sezinwele nezinwele. Shampoo off emva isigamu sehora. Gwema ukuyigcina isikhathi eside. Kulabo abanekhanda elomile nezinwele ezomile: Faka isicelo ezinweleni nasezimpandeni zakho. Massage kahle, usebenzisa ukunyakaza okuyindilinga. Yiyeke okungenani imizuzu engama-30. Ungayigcina futhi ubusuku bonke uma izinwele zakho ziphuka futhi isikhumba sakho sekhanda somile kakhulu. Geza nge-shampoo emnene.
Amafutha e-Almond: Amafutha e-almond akhishwa ezinhlamvwini zetshe. Inamavithamini A, B no-E, ama-fatty acids, amaprotheni, ama-antioxidants, namaminerali afana ne-magnesium aqinisa imicu ebuthakathaka futhi enze umswakama ukhanye. Iqinisa ama-cuticles, bese yenza ungqimba oluvikelayo emiceleni evimbela ukwephuka. Kuyasiza nokukhuthaza ukusakazwa kwezimpande futhi kusize ukwehlisa ukulahleka kwezinwele futhi kukhuthaze ukukhula. Ungangeza nalokhu uwoyela ocindezelwe omsulwa ekudleni kwakho ukondla izinwele zakho ngaphakathi.
Ubani ongasebenzisa: Ilungele izinwele ezomile nezonakele, nezinwele ezikhula kancane. Kuhle futhi kulabo abanesikhumba esomile nesibucayi nezinwele eziphathwa ngemibala. Ayisindi futhi inika izinwele ukuthamba nokunyakaza, futhi isiza ekwenzeni izinwele ziqine futhi zinde.
Isetshenziswa kanjani: Njengoba inguwoyela osinda, ayivale izimpande, ngakho-ke lo oyili ungashiywa ubusuku bonke. Fudumeza uwoyela kancane, bese uwagcobisa ekhanda lakho. Yishiye ubusuku bonke, bese ugeza ikhanda ekuseni. Uma unezinwele ezisontekile kakhulu, ezi-wavy noma ezi-brittle, la mafutha angasetshenziswa njenge-serum yangemva kokugeza. Ithawula loma izinwele zakho, gcoba amaconsi ambalwa kawoyela we-alimondi ezintendeni zezandla zakho, bese uzihambisa ngobude bezinwele. Hlanganisa nekama elinamazinyo abanzi bese uvumela izinwele zome. Izobushelelezi, icwebezele futhi iphathwe.
Amafutha e-Olive: Amafutha omnqumo atholakala esithelweni somnqumo, futhi uwoyela ocebile futhi osebenza ngezindlela eziningi oswakama kakhulu. Inezindawo zokuvikela nokulungisa. Iqukethe ama-antioxidants, amavithamini E no-K, kanye ne-omega-3 no-6 fatty acids evimbela ukulimala nokuthoba imicu eyomile nesikhumba. Kuyasiza ukuvikela i-cuticle yezinwele emonakalweni, futhi kuvimbele ukulahleka komswakama ekhanda, ukuze izinwele zakho zibukeke zondlekile futhi zibushelelezi. Inezindawo zokujula ezijulile. Ivikela izinwele emonakalweni odalwe ngamathuluzi wesitayela futhi inikeze izinwele isiphetho esihle, esibushelelezi. Ngowoyela osindayo, ngakho-ke abantu abanezinwele ezixegayo noma ezondile akufanele bagcine uwoyela isikhathi eside njengoba ungadonsela phansi izinwele zakho.
Ngubani okufanele asebenzise: Ilungele izinwele ezonakele, ezingaconsi phansi, nezinamafutha. Ithoba umqhele wesikhumba osenkingeni, futhi ivimbela ama-flakes ukuthi angaveli ekhanda.
Isetshenziswa kanjani: Sebenzisa le oyili njengokwelashwa kokujula kokujula kwamasonto onke. Massage inani elanele lamafutha omnqumo ekhanda lakho nasemicu. Gcina isigamu sehora, bese ugeza kahle nge-shampoo yokuhlanza. Ungahlanganisa ujusi kalamula naleli oyili ukulwa nenkwethu nokuthulisa isikhumba esilumayo. Amafutha omnqumo asiza ukubuyisela ibhalansi ye-pH yemvelo yesikhumba.
Amafutha we-Argan: Edume kakhulu ngokuthi uwoyela waseMoroccan, ukhishwa enantini yesihlahla se-argan. Ayisindi futhi icebile ku-vitamin E, ne-linoleic ne-oleic acid evikela izinwele ezincanyana, ezihamba ngendiza ngaphandle kokuzikala. Yondla isikhumba esinamanzi ngaphandle kokwenza izinwele zigcobe noma zinamafutha, ivikela izinwele ekuqhekekeni, futhi iswebe izinwele ezi-frizzy, ezibusayo nezisontekile. Kwenza izinwele zithambe futhi zilawuleke. Kuyisihlungi semvelo se-UV futhi kuvikela imicu kusuka ku-photodamage nasekuqhakambeni kombala, ngenkathi inika izinwele ukukhanya nokuhamba.
Ubani ongasebenzisa: Ilungele labo abanesikhumba sekhanda esinamafutha futhi abanomkhuhlane, imicu yokuhamba. Ivikela izinwele ekulimaleni ngenxa yemikhiqizo yesitayela namathuluzi wokushisa. Kubuye kukhanye ngokwanele ukuvikela izinwele eziphethwe ngamakhemikhali.
Isetshenziswa kanjani: Njengoba ilula kakhulu, ingasetshenziswa cishe nsuku zonke. Udinga futhi ukusebenzisa i-shampoo encane kakhulu ukugeza lo oyili. Uwoyela we-Argan usebenza njengesilungisi esimangazayo sezinwele ezinamafutha. Ingasetshenziswa njenge-condition-leave yezinwele ezomile, ezisontekile nezinama-wavy. Mane nje uthinte amaconsi ambalwa alo mafutha phakathi kwezintende zezandla zakho bese uwahambisa kahle phezu komswakama wakho kanye nemicu yakho egeziwe ukuvimbela i-frizz nokugcina izinwele zisendaweni.
Amafutha ahlanganisiwe: Lapho izimpande zemvelo, amagxolo, imbewu kanye namakhambi kungezwa kumafutha amsulwa, aba ngamafutha ahlanganisiwe angasetshenziswa ukukhomba izinkinga ezithile zezinwele. Ngakho-ke, unamafutha e-amla, okuyinhlanganisela yamafutha emvelo afana nokhukhunathi, uwoyela we-alimondi noma uwoyela womnqumo nge-amla noma i-Indian gooseberry ekhishwe. Inothe ngo-vitamin C, futhi ingasetshenziswa ukulwa nenkwethu nokuvikela izinwele ekulimaleni. Uma uhlushwa izinwele, ukwephuka noma ukukhula kancane, sebenzisa umabhebhana uwoyela, okuyinhlanganisela yamafutha emvelo kanye umabhebhana (umuthi ovela emndenini we-daisy). Ibuyisa amandla emicu ebuthakathaka, futhi ithuthukise ukusakazwa kwezimpande, okusiza nokuvuselela ukukhula kwezinwele. Bese kuba khona uwoyela wezinwele wembewu ka-anyanisi, oyingxube yamafutha emvelo nembewu ka-anyanisi omnyama. Kukulungele ukukhula kwezinwele kanye nesikhumba sezinwele esithandekayo. Ithambisa izinwele, ithuthukise amandla ezinwele kanye ne-scalp metabolism, futhi ivuselele izimpande zokukhula okungcono.
Funda futhi: Izithako Ezi-5 Zemvelo Ongazisebenzisa Ukugcoba Izinwele Esikhundleni Sikawoyela
is baking soda safe for face
i-baking soda kumiphumela engemihle ebusweni
amakhambi asekhaya okulahlekelwa izinwele